Izindaba - Izinhlobo zesikhungo semishini yama-eksisi emihlanu
Iningi lezikhungo ezinhlanu ze-axis machining zamukela ukwakheka okungu-3 + 2, okungukuthi, i-XYZ izimbazo ezintathu ezinyakazayo ezihamba phambili kanye nezimbili ze-ABC ezintathu ezijikeleza zizungeze i-XYZ eksisi ngokulandelana. Ukusuka kwisici esikhulu, kukhona i-kyzab, xyzac ne-xyzbc. Ngokwefomu lenhlanganisela yamazembe amabili ajikelezayo, ingahlukaniswa ibe yizinhlobo ezintathu zezikhungo zokuxhuma ama-axis ezinhlanu: uhlobo lwetafula lokujikeleza kabili, i-turntable enohlobo lwekhanda le-swing, nohlobo lwekhanda le-swing kabili. 1: Five-eksisi machining isikhungo isakhiwo double turntable:
A-eksisi + c-eksisi isakhiwo esiphindwe kabili esijikajika, okusebenzekayo kungazungeza i-x-axis, eyi-eksisi. Isikhungo setafula singazungeza ama-degree angama-360 azungeze i-eksisi engu-Z, eyi-c axis. Ngokuhlanganiswa kwe-AC izimbazo ezimbili, ngaphandle kwendawo engezansi yomsebenzi ayikwazi ukucubungulwa, ezinye izindawo ezinhlanu zingacutshungulwa. Izinzuzo zalo mshini ukuthi isakhiwo sokuphotha silula futhi siqinile, futhi izindleko ziphansi, kepha amandla athwele we-worktable alinganiselwe
Lolu hlobo lwe-eksisi yokuxhuma imishini yokuxhuma emihlanu yenziwe nge-axis xyzbc. Uthi lokuphotha ka-eksisi nokuxhumanisa machining isikhungo kuyinto nezimo ikakhulukazi, futhi indawo worktable kuyinto angenamkhawulo, kodwa isakhiwo lokuphotha kuyinkimbinkimbi futhi izindleko eliphezulu.
3: Five-eksisi nokuxhumanisa machining isikhungo nge jika kabili ikhanda isakhiwo:
Ukunemba okuphezulu kokuzungeza kokuphotha kuxazululwa ngokusebenzisa i-shaft drive shaft ephezulu. Ukwakheka kwawo wonke umshini ikakhulukazi uhlobo lomnyango.